‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’को नारा खोक्रो बन्दै | Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’को नारा खोक्रो बन्दै
२०७६ कार्तिक २२, शुक्रबार ०८:४६ गते
केही समय पहिले विश्व आर्थिक मापन केन्द्रले संसारभरिका राष्ट्रहरुको मापन प्रणालीको शृंखलामा “नेपाल दुई प्रतिशतले तल झ¥यो” भन्ने समाचार दियो । वास्तवमा नेपाल राज्यस्तरको तरङ्गचाहिँ नेपालले कुनै प्रगतिको गति लिन नसक्दा तलाउको छालझैँ छचल्किरहेकै छ । एउटै पक्ष राज्यस्तर आफ्नै लीला, आफ्नै फिला फड्कारेर ओहो कस्तो विकास नेपालमा ! भनी विदेशीहरु प्रशंसा गर्छन्, भन्छन् । सरकार पक्षका प्रायःजसो पोसाकका सौखिन बादशाहलाई रित्तो चर्खा घुमाएर पदको अयोग्यताको डरले बिनाकपडाको बयान गरेझैँ ‘हेर्दै जाऊँ कुनै दिन विकासको बाढी देख्नेछौ’ भन्दै दुई वर्ष बिताए । दुई तिहाइको बलियो पाँचवर्षे कार्यकाल बेहोर्न पाएको सरकार दुई वर्ष रित्तै घुम्दैछ । तीन वर्ष योभन्दा फरक नपर्ने ठोकुवा गर्छ बौद्धिक समाज । चिन्ता पनि छ, देशले रित्तै नाचेर दरिद्रीको भुमरीबाट मुक्ति नपाउने डरले ।
लाटागाँडादेखि सर्वसाधारणलाई पनि थाहा भएको कुरा हो– ‘मूली’ असल हुनुपर्छ । निडर, निःस्वार्थी हेडसर (प्रधानाध्यापक) भएको विद्यालय कति सफल देखिन्छ । मूली असल भएको घर प्रस्टसँग छुट्टिन्छ, अरुभन्दा कुशल बन्छ । नेपालको सरकारले शिक्षामा असाध्यै खर्च गर्छ, तर प्रायःजसो विद्यालय शून्यका शून्य पाइन्छ । मुख्य कारण स्कुलको हेडसरकै कमजोरीबाट यसो भएको कुरा लेखाजोखा नै हुँदैन । सरकार यी सबैका उदाहरण हो । संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख हुन्छ । प्रधानमन्त्री नै सिङ्गो राज्य हो । प्रधानमन्त्री त्यागी, निस्वार्थी, आँटिला, मुलाहिजारहित, समर्पित, स्वस्थ यी गुणले सुसज्जित हुनुपर्छ । यी गुणमध्ये एउटामात्र कमी भए ऊ अपाङ्ग ठहर्छ । अपाङ्ग अङ्गले चिताएको कसरी पूरा हुन्छ र ?
२०४६ सालदेखि नेपालमा संसदीय व्यवस्था सुरू भएको हो । ३० वर्षदेखिको संसदीय सरकारहरुको काँधमा जनताको जिम्मेवारी बढ्दा बन्न गएको भन्नुपर्ने हुन्छ, किनभने संसदीय व्यवस्थालाई पुँजीवादमा प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र अथवा जनतासँग सम्बन्धित हुन्छ भन्ने गरिन्छ । बोल्न, लेख्न जनताको पक्षमा स्वतन्त्र हुन्छ अनि विकासको ढोका खुल्छ भन्ने अहोरात्र प्रचारप्रसार गरिन्छ । ३० वर्ष प्रजातन्त्र बिताएर पनि दरिद्री हटेन भन्ने बहानामा कुनै पनि सरकार बहुमतको भएन, एकलौटी सरकार बनेनन्, दिगो विकासको अवसर मिलेन भन्दै आए । इतिहासको दौरानमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, नेकपामात्रै दुई तिहाइको एकलौटी र बलियो पाँच वर्षको आयु भएको सरकार बनेको हुनाले पुँजीवादीकरण यसले गर्न सक्छ, सीमान्तकृत वर्गसम्मले पेटभर खान, एक हर परिहन पाउने आशा राख्नु स्वाभाविकै हो । पुँजीवादमा पुँजी आर्जन हुन्छ तर पुँजी ठूला, धनी वर्गकै हातमा हुन्छ । तल्ला वर्गलाई पेट भर्नसम्म विभिन्न रुपले वितरण गरिन्छ । जस्तोः भारत अहिले विकासमा धेरै फड्को मारेको कुरा सुन्न पाइन्छ, तर त्यो पुँजी आर्जन गरिदिने वर्गको हातमा पुँजी छैन, तर काम पाउन सक्दछ । सरकारले रासन कार्ड दिने, सस्तो भाउमा रासन पाउने, अनुदान दिएर भोकै मर्न नपर्ने व्यवस्था गर्न सक्छ । नेपालमा त्यति पनि सुविधा छैन । यहाँ बलियो र एकलौटी अनि संविधानले दिएको समयसम्म सरकार चलाउन पाउने सुविधा पाएर पनि गर्न सक्ने काम (विकास) को आशा नबन्नुमा मूलीकै कमजोरी हो भन्न बाध्य पारिएको छ ।
पुँजीवादी व्यवस्थामा विकासको शृंखला नै ठेकेदारी प्रथा हो । विकास निर्माण ठेक्काबाट मात्र चल्छ । इमानदार र विश्वासपात्र व्यक्तिलाई मात्र छानेर ठेक्का लगाइन्छ । काम हेरी ठेक्काको अवधि तोकिन्छ । अवधिभित्र काम नगरे हर्जानासहित ठेक्का तोडिन सक्छ । ३० वर्षको इतिहास यसरी नै पार गर्दै केपी ओलीको बलियो सरकारको जिम्मामा आइपुग्यो । आजको अवस्था ठेक्काबिना विकास निर्माण नै नहुने व्यवस्थामा ठेकेदारले समय लम्ब्याउन माग्दा लम्ब्याइदिने, महँगी बढ्दै जाँदासम्म पनि रकम बढाइदिने गरिएको छ । एक वर्षको ठेक्का पाँच वर्ष, दस वर्षसम्म पनि कामै नगरी अलपत्र पारेर राज्य नै अलपत्र पार्दा पनि ती ठेकेदारले सुख पाउने, कारबाही नगर्ने राज्यभरिको रोग नै हो यो । सरकार असफल हुनु, गति बन्द हुनुको पहिलो कारण हो यो ।
राज्यका हरेक अङ्ग कमिसनको जालोमा बेरिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ‘म घूस खान्नँ र घूस खानेलाई छोड्दिनँ’ भन्ने वाचाबमोजिम उहाँ यो कमिसनको खेलमा नपर्न सक्नुहुन्छ । उहाँबाहेकका कमिसनबिना कुराकानी गर्दा, कुनै पनि कामकारबाही गर्नुपर्दा कमिसनबिना चालचलन नै छैन भन्ने कुराले राज्य नै आक्रान्त छ । घूस नखाने, घूस र कमिसनको चक्रमाथि बस्न आनन्द मान्ने मूलीकै कारण विकास (समृद्धि) मा दुई नम्बर तल झर्नुको कारण हो ।
कमिसनतन्त्र, भ्रष्टाचार राज्यको एक नम्बरको अवरोध हो । चीन, अरबका देशहरुमा भ्रष्टाचारीहरुलाई फाँसीसम्मको सजाय दिएको सुनिन्थ्यो । हामीकहाँ भ्रष्टाचारीलाई माया गरेर सरूवा, बढुवा गरिन्छ । भ्रष्टाचार गर्नेहरु ५० वर्ष जन्मकैदकै जस्तो सजाय हुनुको साटो माया, दया र ममतामा पालिएर नै समृद्धिको अङ्क दुई नम्बर तल झरेको कुरा प्रस्ट छ ।
आज बालबच्चा अपहरण गरेर फिरौती माग्ने, नदिए तुरून्तै मारिदिने गरिन्छ । अर्कोतर्फ पाँच वर्षदेखिका अबोध बालिका बलात्कार गर्ने, हत्या नै गर्नेजस्ता जघन्य अपराधले समाज त्रसित छ । बालबालिका बलात्कृत त्यसै अपराध, उसमाथि मारिहाल्ने अर्को अपराध, तर अपराधको पनि कतै तुलनै गर्न नसकिने अपराधको सजायको गुञ्जायसै छैन समाजमा । कुनै पनि बलात्कार र हत्याको दण्ड, सजाय फाँसी नै नभए सरकारको जनतामा संरक्षणको अनुभूति पाउने देखिन्न । यो पनि समृद्धि र सुखी नेपालप्रतिको गिर्दो कारण हो ।
संसदीय व्यवस्थाको ३० वर्ष खासमा प्रजातन्त्रको अगुवा दल नेपाली कांग्रेस रहेको स्पष्ट उदाहरण छ, तापनि एमाले अछूतो भन्न पाइन्न । एउटै गाँठो अगाडि सर्छ– अस्थायी सरकार, अल्पमतको सरकार ! त्यसैभित्र गुडुल्किएर करिब २८ वर्ष बित्यो, परन्तु यो पाँच वर्षको र बलियो सरकारले दिएको नारा पनि छ– ‘समृद्धि र सुखी’ समाजको स्थापना ! पाँच वर्षलाई लक्ष्य गरेर कम से कम डेढ वर्षमा दुई–चारवटा त कतै नयाँ जगको थालनी हुनुपर्ने । बरू उल्टो पो आँकडा जन्मियो, दुई प्रतिशत गि¥यो । यसको शुभ सङ्केत हो पाँच वर्षमा समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको टुङ्गो पाँच प्रतिशत तल झर्ने लाग्छ ।
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नारा र दुई तिहाइको बलियो सरकारबाट नेपालमा अवश्यंभावी परिवर्तन हुन्छ भन्ने आशा र सम्भावना सामाजिक प्राणीलाई हुन्छ, किनभने प्रकृतिको नियम नै हो ‘परिवर्तन’ । परिवर्तन अघि बढेर हुन्छ, पछि फर्केर होइन । अर्कोतर्फ सरकारले जनताबाट अनगिन्ती माध्यममार्फत कर उठाउँछ । जनताबाट उठाइएका धनराशिले वार्षिक बजेट तय गरिन्छ । १४/१५ खर्बको बजेटमध्ये दुई तिहाइ खर्च सरकारहरुको सञ्जालभित्र हुन्छ । एक तिहाइ रकम विकासको नाममा छुट्याइएको भान पारिन्छ । त्यो रकम रचनात्मक पक्ष कतै देखिने गरी लागू भएको पाइँदैन । बजेट सिध्याउन सबै अङ्ग (सरकारी संयन्त्र, ठेकेदारी डफ्फा) मिलेर ‘असारे विकास’ को नाउँले प्रसिद्धि पाएको जमातले भेलबाढीमा बगाएर सिध्याउँछ । विकासको गन्ध निरन्तर यसरी बिलाउँछ । दुई तिहाइको राशि, भत्ता, आआफ्नालाई भागबन्डा, बैठकहरुको नाममा खर्च, देशविदेशको शयर, अग्रगमनको उल्टो प्रतिगमन भई तलतिरको अङ्क बढेको (गिरेको) देखिनु स्वाभाविकै भन्नुको विकल्प छैन ।
‘नेपाल राष्ट्र धनी तर जनता गरिब’ हुनुको कारण हो जलस्रोत । विश्वमा दोस्रो धनी राष्ट्र भनिन्छ जलस्रोतलाई लिएर । जलस्रोतका रुपमा मानवजातिको मेरूदण्ड हो पानी । पानीले सिंचाइको मुहान खुलाउँछ । तर, नेपाली भूमि सुख्खा भएर खेत रोप्न पाइँदैन । पानी सबै सित्तैमा भारत पठाइन्छ । अन्न अथवा खाने वस्तु सबै विदेशबाट ल्याइन्छ, व्यापार घाटाको मुख्य कारण यसैभित्र पर्छ । रुस र चीनले दिएको उद्योगधन्दा सबै बेचेर नेताहरुले खाए । उद्योगको नाममा राष्ट्रिय उद्योग शून्यबराबर छ । आवश्यकीय वस्तु सबै बाहिरबाटै भिœयाइन्छ, व्यापार घाटाको दोस्रो कारण एउटा यो हो । समृद्धि र सुखी नेपालीको यो प्राकृतिक दोहन तेस्रो कारण हो, प्रतिगमनतिरको उल्टो बाटो । नेपालको धनका रुपमा प्रकृतिप्रदत्त वस्तु हो जडीबुटी । जडीबुटीले पनि आर्थिक समृद्धि बन्थ्यो, यसको सुरक्षा र सदुपयोग भए तर यो ह्रास भएर गएको छ सुरक्षाको अभावमा । वनजङ्गल चौँथो धन हो राष्ट्रको । वन विभाग पहिलो शत्रु हो वन नाश गर्नुमा । वन चाटेर समाप्त पार्ने वन माफिया दोस्रो, डँढेलो तेस्रो भएर नेपाल प्राकृतिक धन समाप्त भएर धनी नेपाल आज गरिब बन्यो । प्राकृतिक स्रोत कुनै पनि सुरक्षा नगरी गतिहीन पार्ने कामले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको मात्रा गिर्नुको कारण हो ।
समृद्धि र सुखी नेपालीको एउटा गलत नारा आफ्नो कार्यकालको लक्ष्यको आख्यान गर्ने केपी ओलीमाथि राष्ट्रको अङ्गप्रत्यङ्ग छियाछिया पारेर राष्ट्र नै निजीकरण गर्ने माफियाहरु कुन मितिमा, कसको पालामा रगत चुस्ने जुकासरी अनगिन्ती सङ्ख्यामा कसरी पसे तिनको एउटा एउटा स्रोत पत्ता लगाएर वा तिनले जग हालेको सम्पूर्ण अङ्ग नियन्त्रण गरेर अनुसन्धान गर्दै गर्दा सत्य र तथ्य पत्ता लाग्ने÷लगाउने काम अत्यन्त जरूरी छ । चाहे राजधानीभित्र होस्, चाहे बाहिर देखे जानेजति सम्पूर्णको सम्पत्ति राष्ट्रियकरणको आवश्यकता छ । यो बलियो र स्थायी सरकार असफल भए समृद्धि र सुखी नेपालीको नारा नै फजुल ठहर्छ । प्रधानमन्त्रीको हैसियतले गद्दी आसीन भूमि नै लुटेराले खोसेको बखत गद्दी त बिनाआड र आधारमा पाप्रोमात्रै रहन गयो भन्ने विश्व मापन केन्द्रको आँकडाले के मूल्याङ्कन गर्ने ? यो गम्भीर प्रश्न छ, अहिलेको स्थायी र बलियो कम्युनिस्ट नेकपा सरकारका निम्ति ।